Isivumelwano esiyimpoqo: Ukuvuma noma ukungavumelani? | Law & More BV
Blog » Isivumelwano esiyimpoqo: Ukuvuma noma ukungavumelani?
Umuntu okweletwayo ongasakwazi ukukhokha izikweletu zakhe ezingakakhokhelwa unezinto ezimbalwa angakhetha kuzo. Angazifakela ezakhe ukuphazamiseka noma ufake isicelo sokwamukelwa ohlelweni lokuhlelwa kabusha kwezikweletu ngokusemthethweni. Umuntu okweletwayo angafaka isicelo sokuqothuka kwalowo omkweletayo. Ngaphambi kokuba umuntu okweletwayo amukelwe kwi-WSNP (Natural Persons Debt Restructuring Act), kuzofanele abhekane nenqubo yokuthula. Kule nqubo, kwenziwa umzamo wokufinyelela esivumelwaneni sokuthula nabo bonke ababolekisi. Uma oyedwa noma abaningi ababolekisi bengavumi, okweletayo angacela inkantolo ukuthi iphoqe ababolekisi abenqabayo ukuthi bavume ukukhokhelwa.
Ukukhokhelwa okuyimpoqo kulawulwa ku-athikili 287a Bankruptcy Act. Umuntu okweletwayo kufanele athumele isicelo senkokhelo eyimpoqo enkantolo ngasikhathi sinye nesicelo sokwamukelwa ku-WSNP. Ngemuva kwalokho, bonke ababolekisi abenqabayo babizelwa ekulaleleni. Ungabe usuthumela isivikelo esibhaliwe noma ungabeka phambili ukuzivikela kwakho ngesikhathi sokulalelwa kwecala. Inkantolo izobheka ukuthi ngabe ubungakwenqabeli yini ngokufanelekile ukuxazululwa ngokuthula. Ukungalingani phakathi kwenzalo yakho yokwenqaba kanye nezintshisekelo zalowo okweletayo noma abanye ababolekisi abathintekayo ngokwenqatshwa kuzobhekwa. Uma inkantolo inombono wokuthi ubungeke wenqabe ngokufanelekile ukuvumelana nohlelo lokukhokha isikweletu, isicelo sokufakwa kwesibopho esiyimpoqo sizonikezwa. Kuzofanela-ke ukuthi uvume ukukhokhelwa okunikeziwe bese kufanele wamukele ukukhokhwa okuncane kwesicelo sakho. Ngaphezu kwalokho, njengomuntu obolekayo owenqabayo, uzokwaziswa ukuthi ukhokhe izindleko zenqubo. Uma ukukhokhelwa okuyimpoqo kungafakwanga, kuzohlolwa ukuthi ngabe okweletayo angamukelwa yini ekwakhiweni kabusha kwesikweletu, okungenani inqobo nje uma okweletayo egcina isicelo.
Ngabe kufanele uvume njengomboleki?
Isiqalo ukuthi unelungelo lokukhokhwa ngokugcwele kwesimangalo sakho. Ngakho-ke, empeleni, akudingeki uvume ukukhokha okuyingxenye noma uhlelo lokukhokha (olunokuthula).
Inkantolo izobheka amaqiniso nezimo ezehlukene lapho ibheka isicelo. Ijaji livamise ukuhlola lezi zici ezilandelayo:
isiphakamiso sibhalwe kahle futhi sithembekile;
isiphakamiso sokuhlelwa kabusha kwesikweletu sahlolwa yiqembu elizimele nelingoti (isib. ibhange lesikweletu likamasipala);
sekwenziwe kwacaca ngokwanele ukuthi okunikelwayo kukweqile ukuthi okweletayo kufanele abhekwe njengonamandla okwenza imali;
enye indlela yokuqothuka noma yokwakhiwa kabusha kwesikweletu inikeza amathuba athile kokweletayo;
enye indlela yokuqothuka noma yokwakhiwa kabusha kwesikweletu inikeza amathuba athile kokweletwayo: kungenzeka kangakanani ukuthi okweletwayo owenqabayo athole inani elifanayo noma ngaphezulu?
kungenzeka ukuthi ukubambisana okuphoqelelwe ekuhlelweni kwesikweletu kuhlanekezela ukuncintisana kombolekisi;
kukhona isibonelo samacala afanayo;
buyini ubucayi bentshisekelo yezezimali yombolekisi ngokuhambisana ngokugcwele;
inani lesikweletu esiphelele elibalwa ngumbolekisi owenqabayo;
okweletwayo owenqabayo uzoma yedwa eceleni kwabanye ababolekisi abavuma ukukhokhwa kwesikweletu;
phambilini kube nokuthula noma ukuphoqwa ukukhokhwa kwezikweletu okungazange kwenziwe ngendlela efanele. 
Kunikezwa isibonelo lapha ukuze kucaciswe ukuthi ijaji liwahlola kanjani amacala anjalo. Odabeni oluphambi kweNkantolo Yokudlulisa Amacala eDen Bosch , bekubhekwe ukuthi isithembiso esenziwe ngumuntu okweletayo kulabo abakweletayo ngaphansi kwesivumelwano esinokuthula besingathathwa njengokweqisa okungalindeleka ukuthi abe namandla wezezimali . Kwakubalulekile ukuqaphela ukuthi okweletayo wayesemncane uma kuqhathaniswa (iminyaka engama-25) futhi, ngokwengxenye ngenxa yaleyo minyaka, ngokomthetho, wayenamandla aphezulu okuhola. Izokwazi futhi ukuqedela ukubekwa komsebenzi esikhathini esifushane. Kuleso simo, bekulindeleke ukuthi okweletayo akwazi ukuthola umsebenzi okhokhelwayo. Ukulindelwa kwangempela kokuqashwa akuzange kufakwe ezinhlelweni zokukhokha izikweletu ezinikeziwe. Ngenxa yalokhu, bekungeke kwenzeke ukuthi kunqunywe kahle ukuthi iyiphi indlela yokuhlelwa kabusha kwezikweletu okuzohlinzeka ngokwemiphumela. Ngaphezu kwalokho, isikweletu salowo okweletayo owenqabayo, i-DUO, saba yingxenye enkulu yesikweletu esiphelele. Inkantolo yokudlulisa amacala ibinombono wokuthi i-DUO inganqaba ngokufanelekile ukuvumelana nesivumelwano sokuthula.
Lesi sibonelo senzelwe izinhloso zomfanekiso kuphela. Kwakunezinye izimo ezazibandakanyekile futhi. Ukuthi umbolekisi angenqaba yini ukuvumelana nesivumelwano esinokuthula kuyehluka kuye ngecala. Kuya ngamaqiniso nezimo ezithile. Ngabe ubhekene nesivumelwano esiyimpoqo? Sicela uthinte omunye wabameli ku Law & More. Bangakwenzela ukuzivikela futhi bakusize ngesikhathi sokulalelwa kwecala.
 INkantolo Yokudlulisa Amacala 's-Hertogenbosch 9 Julayi 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.
 i-Hertogenbosch yeNkantolo Yokudlulisa Amacala ngomhlaka 12 Ephreli 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.
Thumela Previous Ingxabano kaTequila
Post Next Izibophezelo zomqashi nezomqashwa ngokoMthetho Wezimo Zokusebenza